राजा बनेर कसैलाई शासन गर्न चाहन्नँ: पूर्व युवराज पारस::KhojOnline.com
राजा बनेर कसैलाई शासन गर्न चाहन्नँ: पूर्व युवराज पारस
पूर्व युवराज पा रस शाहले आफूले कहिल्यै राजा बन्न नचाहेको र अहिले पनि त्यस्तो चाहना नभएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा शुक्रबार बिहान स्टाटस लेख्दै शाहले भनेका छन् –म राजा बनेर कसैलाई शासन गर्न चाहन्नँ। मैले यो पहिले पनि भनेको थिएँ र अहिले पनि भन्छु।
‘म देशलाई ट्रयाकमा फर्काउन चाहन्छु’ शाहले लेखेको छन् ‘त्यसका लागि मलाई युवा पुस्ता चाहिन्छ।‘ उनले देशमा अहिलेको अवस्था आउनुमा बुढो पुस्ता जिम्मेवार भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो काम नयाँ पुस्तामा देश हस्तान्तरण गर्नु भएको बताएका छन्।
आइत, पुस २६, २०७२ मा प्रकाशित
दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ नै रोकेपछि सरकार १० प्रतिशत भाडा बढाउन सहमत
असोज, काठमाडौं । दशैंको मुखमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बृद्धि भएको छ । यातायात व्यवसायीहरूले दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ नै रोकेपछि सरकार १० प्रतिशत भाडा बढाउन सहमत भएको हो । हालै मात्र इन्धनको मूल्य बृद्धि भएपछि व्यवसायीले ५ गतेबाट खुला गर्ने भनिएको अग्रिम टिकट बुकिङ रोकेका थिए...
मेलम्चीले उपत्यका को नदीमा बादिपहिरो आउने
असोज, काठमाडौं । मेलम्चीको पानी वितरणका लागि बिच्छ्याइएको पाइप सफा गरेको फोहर पानीले उपत्यकाका नदीको सतह बढ्ने भएकाले किनारमा नजान आह्वान गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले पत्रकार सम्मेलन गरी बालबालिका तथा चौपायालाई पनि नदी किनारमा नपठाउन अनुरोध गरिएको हो । पाइप...
नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिको आन्दोलनका कारण सार्वजनिक यातायात प्रभावित भ
असोज, सिमरा । नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिले मंगलबारदेखि सुरु गरेको आन्दोलनका कारण सार्वजनिक यातायात प्रभावित भएको छ । सरकारले जारी गरेको सवारी ऐन यातायात मजदुरमैत्री नभएको भन्दै संघर्षमा उत्रिएको संघर्ष समितिले मंगलबारदेखि सवारी साधन नचलाउने घोषणा गरेका छन् । ऐन संशोधनको माग राख्दै आन्दोलत्रमा उत्रिएको...
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अमेरिकामा विरोध प्रदर्शन
काठमाडौं – नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अमेरिकामा विरोध प्रदर्शन भएको छ । अमेरिकामा रहेका केही नेपाली युवाले डा. भट्टराईको बिरोध गरेका हुन् । डा. भट्टाराई एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा उनीमाथि कालो झण्डा सहित केही युवाले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । डिसी...
नेकपाको युवा नेताको तर्क एमाले र माओवादीको कार्ड बोकेर सहरमा दलाल पुजीवाद छिर्यो ।
काठ क्षेत्रमा दुई जना बामपंथीको नाम चर्चित ।पुर्ब मालेका साम्सद नारायण ढकाल र माओवादी ( नेकपा का ) नेता शंकर दुलाल । काठको बिकास र राजनीतिक परिवर्तन लागी निरन्तर लडाइँमा छ्न दुलाल । अखिल नेपाल चलचित्रकर्मी संघको केन्द्रिय नेता समेत रहेका दुलाल नेपालमा निम्न पुजीवादी...
बाबुरामले गरे खतरनाक भविष्यवाणी : अबको पाँच वर्षपछि ओली-प्रचण्डको नेकपा विघटन भएर जानेछ
सुरुमा सुनौं ‘दक्षिणपन्थी खतरा’ र ‘अग्रगामी विकल्प’ का कुरा- मैले नयाँ शक्तिको सम्भावना विश्वस्तरमै नै देखेको छु । वस्तुगत परिस्थिति अब बन्दै आएको छ । संकटहरु देखापरिराखेका छन् । नेपाल पनि अब अर्को विन्दुमा विस्तारै जान्छ । तर, खतरा मैले कहाँ देखिराखेको छु भने हामी जुन...
कम्बोडियाः हिन्दु, बाैद्ध र खमेर भूमि
सियाम रिपको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रातको ९ बजे म ओर्लदैंछु